Nezvedu - Huiyuweiye (Beijing) Fluid Equipment Co., Ltd.
Huiyuweiye (Beijing) Urume Equipment Co., Ltd.
Hyuweiy (Beijing) Fluid Equipment Co, Ltd ikambani yebazi reBeijing Huiyuweiye yepasi rose Environmental Engineering Co, Ltd. (http://www.bjhuiyuguoji.com/index.html)
Iyo yepamusoro tech kambani inoburitsa inoyerera michina, yakasanganiswa michina yekutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi mune imwe, ine yakasimba nyanzvi tekinoroji timu, yakanakisa yekugadzira maitiro, yakanakisa chigadzirwa mhando, yakanaka inokurumidza sevhisi, kupa vashandisi vane yakazara yakazara mhinduro dzemvura. Isu tinoshanda pamwe nemayunivhesiti mazhinji kumisikidza hurefu-hwekuvandudza hukama. Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mukutsvaira marabhoritari uye kugadzirwa kwemaindasitiri uye mimwe minda. Tine nyanzvi mainjiniya enjiniya, magetsi mainjiniya, OEM mainjiniya, uye nyanzvi yekutengesa uye mushure mekutengesa timu yebasa, yakaumba nyanzvi, mudiki, kutsvaga kwechikwata chakakwana.
Yedu kambani mabhesheni paUniversity yeSainzi neTechnology Beijing, Harbin Institute yeTekinoroji, Hebei University yeTekinoroji, Hebei United University uye mamwe mayunivhesiti uye makoreji, ichivimba nekugona kwayo kwakasimba kwetarenda rehunyanzvi, yakaunza yepamberi sainzi uye tekinoroji kubva kune dzimwe nyika ndokutanga shanda nemazvo indasitiri yechiridzwa. yedu yekugadzira tambo ine peristaltic pombi, rabhoritari sirinji pombi, maindasitiri sirinji pombi, plunger pombi uye OEM pombi zvinoenderana nemutengi chaicho chinodiwa. Kusvika parizvino isu tine anopfuura makumi mana akateedzana e360 modhi yekugadzira. Zvigadzirwa zvakaedzwa nehunyanzvi institution, ivo vakasvika kune epamberi epamusoro nhanho.
Kwemakore, hutungamiriri hwekambani hwagara hwakaomerera kune "sainzi uye tekinoroji bhizinesi" pfungwa, kuongorora kwakasiyana uye kwakasimba budiriro mugwagwa.
Yepamberi manejimendi modhi ndiyo tambo yekuvandudza kwaHuiyu. hwakanakisa hunyanzvi ndiyo seiri yekusimudzira kwaHuiyu, Kusangana nekukura kwesainzi uye tekinoroji kusimudzira, Huiyu anofanira kukwanisa kufamba nechikepe. Shinga kuva wekutanga.